पोखरालाई खेलकुदको राजधानी बनाउने गरी बजेट विनियोजन – सचिव दाहाल – Khel Dainik
पोखरालाई खेलकुदको राजधानी बनाउने गरी बजेट विनियोजन – सचिव दाहाल
(रन्जन अधिकारी, पोखरा, खेलदैनिक)
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले पोखरालाई खेलकुदको राजधानी बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् । सचिव दाहालले समग्र खेलकुदकोलागि राज्यबाट वार्षिक रु दुई अर्ब २४ करोड मात्रै छुट्टाइनु ज्यादै न्यून भएको जिकिर गरे ।
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कास्कीले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सचिव दाहालले खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणमा पोखरा रङ्गशाला मन्त्रालयको प्राथमिकता परेको जानकारी दिए । पोखरा रङ्गशालाको पूर्वाधार विकासका लागि मन्त्रालयले रु. तीन करोड ५० लाख छुट्टाएको बताए । उनले हाइ अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरदेखि एडभेञ्चरस गेमहरुका लागि समेत यो ठाउँ निकट र उपयुक्त रहेकाले सोहि अनुसार अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।
उनले सन् २०१९ मा हुने दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका पाँच देखि छ खेल पोखरामा गरिन लागेको र खेलकुद सुरु गर्नुभन्दा अघि नै त्यसका लागि सुरु गरिएका पूर्वाधार सम्पन्न गरिने बताए । भलिबलदेखि आर्चरी, महिला फुटबल खेलहरु पोखरामा हुने उनले जनाए । राखेपको व्यवस्थापन, प्रतिबद्धत्ता र इमान्दारिता जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएकाले यस्तो भएको भन्दै उनले आफूले असक्षम नभन्ने तर ईच्छाशक्ति भने राखेपमा नभएको प्रष्ट पारे ।
मुलुकको संघीय संरचना अनुसार खेलकुदको नयाँ नीति नियम आउन लागेको बताउँदै उनले खेलकुदको गुरु योजनासमेत निर्माणको क्रममा रहेको उल्लेख गरे । पोखरामा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नसके खेलकुदसहितको आर्थिक विकास हुने दाबी गर्दै सचिव दाहालले पोखराको खेल पूर्वाधार निर्माणमा थप बजेट आवश्यक परे माग गर्न आग्रह गरे ।
क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष खगराज पौडेलले पोखरा रङ्गशालाको हातामा मिडिया सेन्टर निर्माणका लागि रु. २० लाख विनियोजन भएको जानकारी गराए । मञ्च, कास्कीका अध्यक्ष केशव पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव रञ्जन अधिकारीले गरेका थिए ।
← कास्कीलाई क्षेत्रिय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डको उपाधि पोखरामा शुक्रबारदेखि हुने अन्तर व्यवसायी फुटसल प्रतियोगिताको तयारी पूरा →
बज्राचार्यको नाममा प्रतिस्ठान गठन गर्ने तयारी असार २१, २०७४
राखेपको सहयोग असार २१, २०७४
सुपर लिगमा ललितपुरद्वारा बुटवलको चुनौति समाप्त असार २१, २०७४
शुरुवात नजिक पुगेर पनि स्थगित भयो फुटसल लिग असार २१, २०७४
बिशालको निर्णायक गोलले धनगढी फाइनलमा असार २१, २०७४
फुटबल खेलाडीहरुलाई सहयोग (फोटो फिचर) असार २१, २०७४